IWoork Co kunye nendlela yayo ekhethekileyo yokwenza uphawu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La Ukutsha ngolwimi, ubabalo kwi-animated kunye nokusetyenziswa kweethoni ezithile kwimibala, kunokwenza umbono omkhulu xa uphela ugcwalisa izindululo zeenkampani ezithile ezifuna into yoqobo neyahlukileyo ngeelogo kunye nentengiso.
Ezi ziinxalenye zeempawu zeWoork Co, a Isitudiyo sokuyila saseSpain ozibiza ukuba uyayithanda imvo yentsusa kunye nezona zindululo zokuyila ukungena kweli hlabathi ngeendlela zakhe zobuchule zokwenza izinto.
IWoork Co yindawo yokusebenzela yoyilo eyasekwa nguDavid Botella noDebbie Martín ondlela-mbono yabo bubuchule nonxibelelwano. Olo lwimi lwezandla okanye olo luhlobo lukhethekileyo kwi-logo yayo nayiphi na imisebenzi yakhe, lunokuba lutyikityo kunye nokutywina ukuze sazi ukuba sijonge omnye wemisebenzi yakhe.
Izimvo kunye nezindululo ziphawula umahluko kweli lizwe linzima lobugcisa kunye noyilo, kwaye kulapho ke kuye kwabavumela ukuba babaluleke abathengi abanjengoJohnnie Walker, ISmirnoff okanye iAmerican Express. Abasunguli bayo babini babekho kwihlabathi lentengiso ngaphezulu kweminyaka engama-25 kwaye oku kuye kwabavumela ukuba benze indlela yabo kolu phononongo esinokuthi siqwalasele ngokukhawuleza ezinye zeendlela zangoku.
Ukwanetyala lakhe kwezinye iiprojekthi ebezikho zinikwe kwiminyhadala yentengiso I-Canners, i-TheFWA, i-AWWWARDS, i-FIAP kunye ne-IMAN phakathi kwabanye abaninzi. Ungapasa kwipotifoliyo yakho ekwi-intanethi ukwazi eminye yemisebenzi yabo kunye nendlela abazinikezela ngayo ngokukhethekileyo kwimibala ethe tyaba kunye nezo mvalo zigobileyo kwaye zirhangqiwe ezenza ukuba abanye babalinganiswa babo abayileleyo batsale amandla ombukeli.
Isifundo esithi uboleka ngokukodwa kuphawu lokuthengisa kwaye oko kubonisa umsebenzi omkhulu owenziwe nakwimisebenzi yethu evela kuyilo nakwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » IWoork Co, isitudiyo sokuyila saseSpain esinombono onomdla